onye ogwu, Nelly Furtado, onye na-emepụta ihe, onye na-ede egwú, onye ọbụ abụ
Nelly Kim Furtado(* 2 December 1978, Victoria, Canada) bụ onye na-abụ abụ Canada, onye na-ede egwú, onye na-akụ egwú, onye na-eme ihe nkiri na onye na-eme ihe nkiri. 2000 dere ihe mbụ ọ ga-eme na album ahụWhoa, Nelly!, bụ nke ọ natara Grammy Award mara mma ekeleAdị m ka nnụnụ. Mgbe ọ mụrụ nwa ya nwanyị na 2002, ọ laghachiri na egwu ahụ na ọbaNdi mmadu, bụ ebe onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye zụlitere yaMaka(mgbe edere ya na ezighi eziIke), nke bu ihe ndi ochichi nke 2004 n'egwuregwu football nke Europe na Portugal. N'oge okpomọkụ 2006 wepụtara ya album atọLoose, bụ nke na-enwekwa ihe ịga nke ọmaManeaterma ọ bụMgba aghara.
A maara ya nke ọma maka nchọpụta ya na ngwá egwú dị iche iche, bụ nke ọ na-enye egwu dịgasị iche na ịgwakọta ụdị na ọdịdị dị iche iche na ọba ya.
A mụrụ ya na Victoria na o nwere ụmụ atọ. Ụmụaka bi na Victoria (British Columbia, Canada). Ndị mụrụ ya bụ Maria Manuela na Antonio Jose Furtado si Azores (Portugal). A na-enye aha Nym Kim na Soviet gymnast.
Ndị mụrụ ya si na Portugal gaa Canada na njedebe 60. afọ. Ndị nne na nna, tinyere ụmụnne ha, nwere mmekọrịta na obodo abụọ ahụ, ya mere ha bụkwa ndị Portuguese kachasị mma.
Ngwakọta dị iche iche nke ọdịbendị kemgbe ọ bụ nwata tụnyere ya, abụ mbụ ọ dere bụ ihe ka ukwuu n'asụsụ abụọ. Mgbe e mesịrị, ọ malitere ịmụ Spanish na Hindi n'ụlọ akwụkwọ.
Ebe ọ bụ na ndị mụrụ ya enweghị ego buru ibu, ọ gara rụọ ọrụ site na nwata, ya na mama ya na-arụ ọrụ dị ka odibo, ma emesị nye ya onye na-elekọta ụlọ. Dị ka o mesịrị kweta na otu ajụjụ ọnụ, nke a nyeere ya aka ịchọpụta ezi onwe ya ma tinye ya na ụzọ dị mma.
Ya na nne ya pụtara n'ememe ahụ n'oge mbụụbọchị Portuguese. Mgbe ọ dị afọ itoolu, ọ malitere ịmalite ịkpọ trombone na ukulele, emesịa na guitar na igodo.
Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, ọ malitere igwu egwu na ìgwè mbụ ya. Ha na-abụ abụ n'asụsụ Portuguese, Nelly sikwa na-ede egwú. Na afọ ndị sochirinụ, ndị DJ dị iche iche na ndị na-ege ntị malitere ịmalite ya. N'oge nleta ya na Toronto na 1996, ọ zutere ìgwè ndị hip-hop CanadaJikọọ na Ọkwánke a emetụtakwala ya. Na oge okpomọkụ 1996 gbakọtara na duoNelstarkaNewkirkha abụọ malitekwara ịrụ ọrụ. Afọ ole na ole ka e mesịrị, ha nile nweere onwe ha, Nelly dekwara ndekọ ngosi ngosi ole na ole ọ malitere ịfe ụlọ ụlọ egwu egwu, ihe kachasị mmasị na DreamWorks.
Iji meghee album ya, Gerald Eaton na Brian West, onye nyeere ya aka ịhapụ akwụkwọ 2000 na October, kpọrọ ya. Ihe kacha mma nke album a bụ nke atọ n'ime ụmụ nwoke atọAdị m ka nnụnụ,Gbanyụọ Ìhè ahụka... Na Radio (Cheta Ụbọchị). 2002 natara ndị nsonye 4 maka Grammy Awards mara mma, emesị nweta otu gramophone na abụ kachasị mma maka abụ ahụAdị m ka nnụnụ. Tụkwasị na nke a, a na-eto ndị nkatọ nke Furtado dị ka ngwakọta nke ụda dị iche na ụdị. Magazin dị mmaSlantọ kọwara album ahụ dị ka "ọmarịcha ọhụrụ". The album na-aga nke ọma mechara gaa njem na-aga nke ọma na ọ gụsịrị akwụkwọ na Moby.
Tupu ya ewepụta akwụkwọ nke abụọ ya, ọ mụrụ nwa mbụ ya, nwa nwanyị aha ya bụ Nevis. A tọhapụrụ album Folklore na November 2003 ma dee abụ dị iche iche na ncheta nke enweghị ncheta nwata, otu n'ime abụ,Ọchịchị Ụmụaka, o tinyekwara ụmụ ya nwanyị nta. Ọtụtụ n'ime ndị na-ege ntị nwetara abụ a na-akpọMaka, bụ onye na-abụ abụ n'asụsụ Portuguese ya ma ghọọ abụ na-achịkwa nke 2004 European Football Championship. A na-abụ abụ ahụ tupu 4 ikpeazụ. July 2004 na Lisbon. Egwú ndị ọzọ dị mkpa ghọrọ balladGbalịama ọ bụ pilotIkeghi (Kwuo Ihe Ị Chọrọ).
Ma album ahụghị nke ọma dị ka mmalite ya, ụta ahụ dabara na ụlọ obibi akwụkwọ na-enweghị nkesa, yabụ na njedebe nke 2005, ọ hapụrụ DreamWorks gaa Geffen Records.
A tọhapụrụ ya album atọ na June, 2006, ma nwee ihe ịga nke ọma na-eme nke mbụWhoa, Nelly. Onye ọbụ abụ ejirila ọtụtụ ndị ọkachamara a ma ama dị ka Timbaland na Juanes. O wee nwee ike ime nke ahụ na onye ọ bụla eserese. Na Europe, o wepụtara abụ a na-akpọManeatermgbe ahụ, na America, abụ a na-akpọ ahaMgba aghara, ma n'ime otu izu duziri ma ihe osise mara mma na Britain na United States.
Whoa, Nelly!(nke 24 a na-ebipụta 2000, nke zuru ụwa ọnụ - 7 nde)
Ndi mmadu(25 November 2003, 2 Ọtụtụ nde mmadụ)
Loose(9 June 2006)
Atụmatụ m(14 September 2009)
Kasị Mma nke Nelly Furtado(15 November 2010)
A Naghị eme Mmụọ Nsọ(17 September 2012)
Ụgbọ mmiri ahụ(31 March 2017)
Akara Obere DVD(2007)
Adị m ka nnụnụ
Gbanyụọ Ìhè ahụ
... Na Radio (Cheta Ụbọchị)
Ikeghi (Kwuo Ihe Ị Chọrọ)
Ahịhịa bụ Green
Ihe Ọma Niile (Na-abịa ná njedebe)
Nye m ya (nke gosiri Timbaland, Justin Timberlake)
Mmụọ adịghị emebi emebi
Mkpụrụ Eberibe (nke gosiri James Morrison)
1: Maneater (song, Nelly Furtado)
3: Na Na Na Na Na
5: Atụmatụ m
6: Adị m ka nnụnụ
7: ... Na Radio (Cheta Ụbọchị)
8: Hey, Nwoke!
9: Na-ekwu na ọ ziri ezi
11: Nye M (Song, Timbaland)
13: Trynna Finda Ụzọ
14: Gbanyụọ Ìhè ahụ
16: Ịgba aghara
20: Ihe Ọma Niile (Na-abịa ná njedebe)
22: Eska Music Awards 2013
24: Ikeghi (Kwuo Ihe Ị Chọrọ)
26: Naanị otu ndị na -
27: Ahịhịa bụ Green
29: Nwee Ugboro Ochie
30: Onye mmeputa egwu
31: Otu onye na-ezumike
33: Onye ga-ahụ n'anya
34: Foto zuru oke
42: Ndepụta nke ndị egwú R & B
43: Ememe Southside
44: A na-edekọ egwu NZ
46: Ememme Sanremo
48: 2. December
Nelly Kim Furtado (* 2. 1978 December, Victoria, Canada) bụ a Canadian na-agụ egwú, songwriter, instrumentalist, ndekọ na-emeputa, na mgbe ụfọdụ omee. The ukwu mbụ ịga nke ọma bụ na 2000 na album Whoa, Nelly!, Nke e ọdịda nke prestigious Grammy Award ekele na song m Dị ka a Bird. Mgbe ọmụmụ nke nwa ya nwaanyị na 2002 ọ laghachiri ebe a na-anọ ebe ahụ na album akụkọ ifo, ebe isi na-elekwasị anya teta otu Forca (mgbe e dere ọhụma Forca), nke bu na ukara ukwe nke European Football Championship na Portugal 2004. N'oge ọkọchị, 2006 wepụtara ya album nke atọ, Loose, nke na-emepụta Maneater nke ọma ma ọ bụ Mgbagwoju anya.
Maneater bụ abụ nke Nelly Furtado si na album ya nke atọ. A na-edekọ abụ ahụ na Timbaland, bụ onye mepụtara ya. Singl mbụ gara Europe, ebe Furtado ghọrọ abụ a kacha mara amara kemgbe ahụ.
Whoa, Nelly! bụ album mbụ nke onye ọbụ abụ Canada bụ Nelly Furtado. 24 tọhapụrụ album ahụ. October 2000 ma tinye oke egwu dị ka Nnụnụ ma ọ bụ gbanyụọ Ìhè ahụ. N'ihi na abụ m dị ka nnụnụ, ọ natalarị Grammy Awards mara mma n'àgwà kasị mma nke afọ.
N'abalị Na-eto Eto bụ abụ nke onye na-abụ abụ egwú Canada bụ Nelly Furtado bụrụ abụ. Egwú ahụ si n'akwụkwọ nke ise nke studio ya bụ Best of Nelly Furtado. Ndị na-emepụta ihe bụ Salaam Remi na Staybent Krunk-A-Delic.
Nelli Vladimirovna Kim (Нелли Владимировна Ким; 29. 1957 July Surab) bụ onye bụbu Soviet eme egwuregwu mmega ahụ, ise-oge Olympic mmeri na ise oge mmeri světa.Život bụ a Korean nna na nne nke Tatar malite. Amuru ma zulite na Tajikistan, Kazakhstan, Shymkent, ebe afọ itoolu, a zụrụ na club Spartak. The nwa-abụghị ihe a oké talent, n'afọ 1973 merie ndị egwuregwu nke USSR na ukem Ogwe na a kpọrọ mba otu nke na ọ na ndibọhọ World Cup 1974 aha ke otu mpi. Mgbe Olympics na Montreal 1976 agha a duel na Romanian Nadia Comaneci, onye mere na-gburugburu, ma ọ bụ onye òtù nke na-emeri otu ma merie onye gold na uko na n'ala omumu, ebe ha mmega, ji nghọta na femininity ikwu okwu, o meriri ndị mbụ na Olympic akụkọ ihe mere eme isi ihe iri. N'ụlọ Olympic nke dị na Moscow, 1980 kwadoro ihe mbụ nrite na asọmpi egwuregwu na n'ọhịa. In-gburugburu bụ ya kasị ukwuu nweta World onye mmeri na 1979 na nke abụọ a na-World Cup n'otu afọ.
'Mi Plan bụ akwụkwọ mbụ Spanish zuru ezu nke onye na-abụ abụ Canada na Portuguese na Nelly Furtado na-egwu egwú na nke anọ studio studio ya. E wepụtara 15. September, December 2009 2008.ProdukceV bipụtara na El Diario La Prensa isiokwu na Furtado ezube gbaa English na Spanish songs maka ha forthcoming ọhụrụ album, nke na-atụ anya na-abịa mgbe n'oge May ka August. Ná mmalite nke March, ọ bụrụ na ịdekọ abụ "Gotta Know", bụ nke Furtado kwuru na ọ bụ ya kpatara ya, wepụtara na ịntanetị. 4 na Turtado bipụtara mmeghachi omume a. March 2009 na ya myspace na nkwupụta na song bụghị hers na na dị nnọọ dere ọhụrụ abụọ albums - onye na Spanish na otu na Portuguese. Na June, 2009 kwupụtara aha album ọhụrụ "Mi Plan" na aha onye mbụ "Manos al Aire".
M Dị ka a Bird (m dị ka nnụnụ) bụ nke abụọ otu si Nelly si mpụta mbụ album Whoa, Nelly! .Mgbe N'ajụjụ Nelly kwetara na nke a bụ ya mmasị song, n'ihi na ọ bụ dị mfe ma svobodná.I'm Dị ka a Bird bụ otu n'ime ndị kasị ihe ịga nke ọma kpọrọ nke afọ 2001, na niile isi music chaatị dị iche iche nwetara n'ime TOP 10.Díky a song, Nelly were na 2002 Grammy award maka kasị mma nwanyi píseň.Videoklip na song e eduzi Francis Lawrence.Tracklist "m dị ka a Bird "(LP version) 'Party (Reprise)" (Non-LP version) "m Obi Ị", "My Ịhụnanya Epuo miri" (Non-LP version) ebe n'ụwa snippet nke ederede m dị ka nnụnụ, m naanị ofufe pụọ amaghị ebe mkpụrụ obi m, m na-amaghị ebe m n'ụlọ bụ (na nwa niile m mkpa ka ị mara ihe bụ) m dị ka nnụnụ, m naanị ofufe pụọ na-amaghị ebe bụ mkpụrụ obi m , Amaghị m ebe ebe obibi m bụ Ihe niile m chọrọ ka ị mara bụ
... Na Radio (Cheta ụbọchị) bụ nke anọ nke si na album mbụ ahụ, Nelly Furtado, nke a na-akpọ Whoa, Nelly! A kpọrọ abụ mbụ ahụ na Radio, ma okwu ahụ A na-emegharị shit ma mechaa wepu aha nke abụ ahụ.
Hey, Nwoke! (Hey, Men!) Nke ise bụ otu site na album Whoa, Nelly! Onye na-egwu Canada Nelly Furtado. A tọhapụrụ otu onye ahụ na Germany na UK. Ọ bụ Duo Gerald Eaton na Brian West wepụtara abụ ahụ ọzọ. Furtado kwuru banyere abụ ahụ, sị: "Ọ bụ egwu dị egwu, ma obere nkume. Na ndekọ nchịkọta akụkọ anyị nwere choreographed ndekọ, ma ọ dịtụ dị iche karịa anyị chọrọ. "
Kwuo Ọ Right (Kwuo ya nri) bụ a song o dere Nelly, Timbaland na Danja na ghọrọ nke-anọ otu si album Loose, Furtado ẹkesiode ke 2006.Píseň anyị na-nominated n'ihi na a Grammy Award na udi nke kacha mma nwanyi píseň.InformaceProces dee ihe a song malitere na studio otu ụbọchị, gburugburu anọ elekere ke usenubọk, mgbe Timbaland Furtado na-atụ aro na ọ hapụrụ ụlọ n'ihi na ọ bụ na ike gwụrụ. Furtado jụrụ ma malite ịmị. Ndị na-emepụta ihe abụọ ahụ sonyere onye ọbụ abụ ahụ.
Egwuregwu egwu bụ akara nke abụọ nke onye ọbụ abụ Canada bụ Nelly Furtado nke 25 wepụtara. November 2003. The album aghọwo ezigbo ihe ịga nke ọma, ma o nwetaghị aha nke mbụ album, Whoa, Nelly!. Akwukwo a bu kwa Music Força, nke bido n'egwuregwu nke European football championship na 2004.
Nye m ya abụ nke Timbaland, nke nyere Nelly Furtado na Justin Timberlake aka. Egwú ahụ si n'akwụkwọ album ya bụ Shock Value ma tọhapụrụ ya na 2007. Dị ka MediaTraffic si kwuo, nye m ya bụ 10th kasị ọganihu egwu nke afọ 2007. A na-ahọrọ nke a maka Award Grammy na Ngalaba Ngwakọta Kasị Mma .InformationAkwụkwọ nke atọ ndị na-ede egwú nwere òkè ha na abụ ahụ, Nelly Furtado na-abụ abụ. Timbaland soro ndi oru abuo na ndi ozo megharia n'igwe egwu ha ma choro ha ka ha mekota onu ha.
Fuerte bụ abụ nke onye na-abụ abụ egwú nke Canada bụ Nelly Furtado na-abụ abụ. Egwú ahụ sitere n'akwụkwọ ya nke ise, Mi Plan, na ọ bụ na mbipute remix nke ọba a. Onye na-emeputa ihe bụ Salaam Remi.
Trynna Finda Way bụ nke isii na nke ikpeazụ site Nelly Furtado site na mpido mbụ ya. Egwú ahụ mere naanị na Mexico. Furtado kọwara abụ a dị ka onye maara ihe, nke a na-akpọ Bitníky sitere na abụ a. N'elu abụ ahụ, e nwere mmetụta dị egwu nke hip hop na-emetụta ya n'oge uto. Anyị nwekwara ike ịnụ ngwá ọrụ Brazil nke berimbau. Trylena Finda Way pụtara na ụda ụda maka ihe nkiri Diary nke Princess na anyị nwere ike ịnụ ya na Ụlọ Akwụkwọ Ndụ.
Gbanyụọ Light (Gbanyụọ ìhè) bụ nke atọ otu Nelly, bụ onye si mbụ ya efere Whoa, Nelly! .N'oge USA nwetara song ọbụna ise ebe, nke bụ ihe kasị mma na ọnọdụ ruo mgbe 2006 mgbe ọ kwụsịrị na a song Mgba aghara, onye ruru n'elu Billboard Hot 100.
Timothy Z. Mosley (* 10. 1971 March Norfolk, Virginia), mma mara n'okpuru pseudonym Timbaland bụ American dere, na-emeputa na rapper, bụ onye ya songs blurs ọdịiche n'etiti hip iwuli elu, na-agba egwú music na pop. Ọ bụkwa a so na hip iwuli elu ìgwè nke Timbaland & Mangoo.
Mgbagwoju anya bu Nelly Furtado nke di n'akpa album ya nke ato. E wepụtara onye na-agụ egwú na 2006 ma bụrụ onye mbụ na-anọ na kọntinent America. Na Europe ọ gara dịka Maneater nke abụọ.
Ngwaputa bu otu onye na-egwu Canada Nelly Furtado sitere na Folklore. The song a họọrọ dị anọ otu na e wepụtara na ọdịda nke 2004.Furtado na song "Song nke uri, m na-akpọ nwa ya ebibi. Mgbe ị dị afọ iri na ụma chọrọ ịnwa ihe nile, ị dị ka oké ifufe. Mgbe ahụ, ị ​​mara ihe, ma ebe dị n'ime bụ nwa gị ma ọ bụ agadi, ma ọ pụtaghị mgbe niile. Ejiri m dee mgbe m gara capoeira, bụ onye Brazil mara mma, ọ bụ ihe m mere n'afọ iri na ụma. "
Okwu maneater nwere ike ịpụta: Maneater (Hall & Oates) - egwu site Hall & Oates
Gbalịa bụ otu Nelly Furtado si na album nke abụọ a na - akpọ Folklore. Ọ bụ Brian West mere abụ ahụ ka ọ bụrụ onye nke abụọ n'ime album ahụ na nkeji iri na ise nke 2004. A na-edekwa abụ ahụ n'usoro abụọ site na Smallville na Joan nke Arcadia.
Ihe Ọma Niile (Na-abịa ná njedebe) bụ otu onye na-agụ egwú bụ Nelly Furtado, onye dere Timbaland, Danja na Chris Martin. E wepụtara otu ahụ na 2006 ma bụrụ onye mbụ na sụgharịa Czech.
"Hot N 'Fun" bụ abụ nke ìgwè American hip-hop group NERD The song comes from his fourth studio album Ọ dịghị ihe. Ihe mmeputa nke Neptunes mere. A na-enye abụ a aka site na onye ọbụ abụ na-ede egwú Portuguese Nelly Furtado.
Egwuregwu Ahka Music 2013 bụ Eska bụ mbipụta nke atọ nke Eska Music Awards, nke e mere na 3. August 2013 na Szczecin, Poland. E nyere mgbasa ozi na TVP1 na ndị na-eme ihe ngosi bụ Ada Fijał na Krzysztof "Jankes" Jankowski.
Loose bụ album nke atọ nke ọbụ abụ nke Canada bụ Nelly Furtado, nke 9 wepụtara. June 2006. N'akwụkwọ a, Furtado na-arụ ọrụ karịsịa na Timbaland, onye ya na abụ abụ abụ abụ na-aga nke ọma Maneater na Promiscuous.
Enweghị ike (Kwuo ihe ị chọrọ) Bezmozný (Kwuo ihe ị chọrọ) bụ Nelly otu si ya abụọ album, wepụtara akụkọ ifo, nke e wepụtara na 2003.Singl emepụta a ụzọ Track & Field na natara n'ozuzu oke oma banyere ihe song enweghị ike recenze.Furtado ọ sịrị: " Ahụla m ọtụtụ ihe ngosi ndị dịgasị iche iche na mberede wee kwụsị. Ihe niile malitere itinye aka na ụda ahụ. Nke ahụ bụ mkpali. Ihe odide a bụ ndụ anyị na-eche na anyị bi n'ime ọha mmadụ, ma e nwekwara mmetụta sitere na ụwa anyị nwere mgbagwoju anya. "
Força bụ nke atọ site na Nelly Furtado site na ya abụọ album Folklore. A na-abụ abụ n'abụ na Bekee n'asụsụ Portuguese. Track na Field na-abụ abụ ahụ. E mere ka ntọhapụ ya maka June 2004, abụ ahụ wee bụrụ abụ otuto nke 2004 European Football Championship nke a na Portugal.
Naanị otu onye bụ Nelly Furtado, nke pụtara na ụda egwú na ihe nkiri nkiri Brokedown. A tọhapụrụ abụ a na 2000, ọnwa abụọ tupu a tọhapụ aha onye bụ Whoa, Nelly!.
Na ahihia Green (Ezie bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) bụ ọhụrụ otu si album akụkọ ifo Canadian agụ egwú Nelly, nke e dere na-emepụta site Mike Elizondo.The Ezie bụ Green bụ ise n'ozuzu otu si album, ma naanị otu onye nke e filmed video. N'ihi nke a, e bipụtara ya naanị ná mba ole na ole, ebe ọ dị ezigbo mma na Germany.
Uru nkwụsị (na Timbaland Presents Shock Value) bụ nke abụọ studio album na album ise n'ozuzu, si na-emepụta egwú na rapper Timbaland. Ọ bụkwa nke mbụ Timbaland album ka a tọhapụrụ na Interscope Records. Ndị na-ese ihe nkiri dịka Justin Timberlake, The Hives, Fall Fall, Keri Hilson, Nelly Furtado, Missy Elliott, 50 Cent, Dr. Dre, OneRublic, Elton John, Magoo na Nicole Scherzinger.
Nweta Ur freak On Hip-iwuli elu otu dere site American rapper Missy Elliott na Timbaland emepụta maka ya nke atọ studio album Miss E ... Ya mere Addictive.Byl tọhapụrụ ka na-edu ndú otu si album, ruru German Hot 7.místa 100 na ghọrọ nke ise ihe ịga nke ọma otu ụbọchị . Ndị otu ruru Missyina kacha mma ebe ke England na-anọ na nọgidere na Top 20 izu isii. Nelly Furtado pụtara na remix nke abụ. Na video egosi dị ka ọbịa Nate Dogg, Nicole Wray, Ludacris, Busta Rhymes, Spliff Star, Eve, Master P, Romeo, Timbaland, Jeazanaya Ịchịisi na LL Jụụ J.
Music emeputa bụ onye bụ maka na ihe ịga nke ọma, na ndekọ, mmepụta na arụmọrụ nke a musical nahrávky.Úkolem dị otú ahụ na-emepụta jeZpůsob nkọwa nke music nhọrọ interpretaVýběr ọzọ egwú chọrọ maka mmejuputa dílaDohled n'elu nahrávkyVolí engineer, imekọ ihe ọnụ (onye) Nyere na-eke albums ma ọ bụ singlůV electronic music na pop music, na-emeputa na-elekọta agwakọta, musical ndokwa, ịmụta, na ihe ndị mejupụtara onwe ya (na ya, mmejuputa iwu). Na egwu egwu nke oge, ọrụ nke onye na-emeputa egwu egwu yiri ihe nduzi egwu.
Otu Minute Man Hip-iwuli elu otu wepụtara na 2001 American rapper Missy Elliott.V mbụ version apụta Ludacris na Trina, ma album Miss E ... Ya mere Iri Mmadụ Ahụ Ludacris kwadoro naanị. Song site Missy Elliott, Ludacris na Trina na-emepụta site Timbaland, na Missy Big tank Elliott.V remix egosi Jay-Z na bụkwa na album Miss E ... Ya mere Addictive.Singl etinye na German Hot 15.místě 100 na ghọrọ ya nke abụọ 10 dị na Angland ebe ọ nọ na 10. Missy Elliott Nweta Ur freak gosiri Ọ na One Minute Man, tinyere Nelly, Ludacris na Trina na MTV Video Music Awards 2001 dị ka a ụtụ ahụ n'ụzọ dị mwute nwụrụ anwụ na-agụ egwú Aaliyah. Na 2002 video maka otu a nominated n'ihi na 6 MTV Video Music Awards, na Best Hip Hop Video, Best direkce, dezie Best, Best Art Direction, Best Special mmetụta na Best eju.
Enweghị ike ike: enweghị ike (akpa ọchị) - na-atọ ọchị usoro nkwusa iju-akpa ọchị, si 2004Powerless (usoro) - American telivishọn usoro nke 2017Powerless (song, linkin park) - song nke American gbalaga linkin park si 2012Powerless (song Rudimental) - Abụ nke British òtù Rudimental nke 2014
A n'Anya nwere ike pụtara na aha: o n'Anya (song Queen), song nke afọ 1976 na album A Day na RacesSomebody n'Anya (song, Jefferson ụgbọelu), song nke afọ 1967 na album Surrealistic PillowSomebody n'Anya (song Nelly Furtado), a bonus track na album LooseSomebody n'Anya (song Leighton Meester), a song wepụtara 2009, ẹkwọ ọnụ na Robin ThickemSomebody n'Anya (song, Justin Now), otu nke afọ 2010 ẹdude na album My World 2.0Somebody n'Anya (film, 1994), ihe nkiri American site n'aka onye nduzi Rockefeller si na 1994
Foto zuru okè pụrụ izo aka: Na film: Foto zuru okè (film, 1995) - a ntochi starring egwuri site Dave Thomas na Mary Page KellerPicture Zuru (film, 1997) - a ihunanya ntochi, na-egwu Jennifer Aniston na Jay MohrV akwụkwọ: Foto zuru okè (akwụkwọ ) - a akwụkwọ nke afọ 1995 onye dere Jodi PicoultPicture zuru okè - a akwụkwọ sitere n'ike mmụọ nsọ site na telivishọn usoro ČarodějkyV music: Foto zuru okè - album nke ọ bụla AvenuePicture zuru okè - album nke SoilPicture zuru okè - album nke pianist Ahmad JamalaPicture zuru okè - album nke Sky "Foto dị na zuru okè" - song na-agụ egwú Angela Via "Foto dị na zuru okè" - a song si album ụda nke Imegwara nke rapper Chamillionaire "Foto dị na zuru okè" - a song si album Nanị site Chris Brown si "Foto dị na zuru okè!" - a song si album cupcakes atọ dị ka Violence site Jeffree Star "Foto dị na zuru okè" - a song si Change Your World site Michael Smith
"Maneater" Blue-eyed mkpụrụ obi / New Wave song American duo Hall & Oates, emi odude ke album H2O, a otu bipụtara site na ụlọ ọrụ RCA Records na 1982. Abụ abụrụ nkeji anọ ederede Sara Allen, Daryl Hall na John Oates. The song rukwara n'ebe #1 German Hot 100 18 si ebe ọ nọgidere. December 1982 ruo 8. January 1983.
Dima Bilan (Дима Билан na Russian), onye ezigbo aha Viktor Belan Nikolayevich (Russian Виктор Николаевич Белан) bụ a Russian pop-agụ egwú karačejského na Russian původu.Narodil na 24. December 1981 na Ust-Džegutě na Karachay-Cherkessia na USSR (ugbu a Russia) .Dima anọchi anya Russia na Eurovision Song Kọntestị ke 2006 na song mgbe Ka Ị Gaa, mgbe o kwusịrị nke abụọ. Afọ abụọ mgbe e mesịrị, 24. May 2008 ghọrọ onye mmeri nke Eurovision 2008 Grand Prix, na Kwere. Edvin Marton na Yevgeniy Pljuschenko nyekwara aka imeri ya.
TWiiNS na-agụ egwú, A, omee na musical ejima Daniela na Veronika Nízlové (15. 1986 May Hronský Beňadik Czechoslovakia) .www.twiinsmusic.euKariéraZpívat malitere na nwata. Otu n'ime ihe mbụ ha mmasị songs bụ "Boys" site Italian na-agụ egwú Sabrina Selermo [iyi?]. Ha nyere 4 CD, bụ nke e nyere ha ọlaedo atọ na otu platinum album. Ruo afọ anọ, TV show "Ụlọ ngosi" na TV Markiza. N'elu egwú, ndị ọrụ nzaghachi na-arụ ọrụ nke Tereza. Na April 2008 m dere song "m na-amaghị" video maka song dere na Miami. Nke a song bụ a mmekota na American na-emeputa Jimmy Douglesem, bụ ndị na-arụ ọrụ na Timbaland, Nelly, Justin Timberlake, Duran Duran na ọtụtụ ndị ọzọ. [Source?]
Dua Lipa (22, August 1995, London, UK) bụ onye na-abụ Bekee, onye na-ede abụ na ihe nlereanya. A mụrụ ya na 22. August 1995 na London na agbụrụ Kosovo Albanian ndị hapụrụ Pristina na 90. afọ 20. narị afọ. O gara ụlọ akwụkwọ ihe nkiri Sylvia Young tupu ya akwaa na 2008 na ezinụlọ ya na Kosovo. Na 16, ọ laghachiri London iji ghọọ onye ọbụ abụ. Esisịt ini ke oro ebede enye ama ọtọn̄ọ ndinam utom. Nna ya bụ Dukagjin Lipa bụ onye na-abụ egwu rock Kosovo-Albanian. Na 14, ọ malitere ịdekọ ihe mkpuchi nke ndị ọhụụ kachasị amasị ya, dị ka Christina Aguilera na Nelly Furtado, tinye ha na YouTube.
Keri Lynn Hilson (* 5. 1982 December Atlanta, Georgia, USA) bụ American R & B na-agụ egwú na andiwet ekwenyere Mpaghara 4 / Mosley Music Group / Interscope. Ọ bụ akụkụ nke ndị otu na ndị na-emepụta ihe dị ka The Clutch.
Mark Paul Oakenfold (* 30. 1963 August, Greenhithe, Kent, England), bụ ọhụụ emeputa ihe na DJ. BioNime 1987, Paul hụrụ egwu egwu egwu egwu. N'ịbụ ndị music si Ibiza, Italo disko, mkpụrụ obi ụlọ, Pọl malitere etolite, karịsịa remixes si U2, Oke Attack, nwụchiri Development, The Cure, Snoop doggy Dogg, Nanị Red, New Order na The Shamen, na mmekota na Steve Osbornem n'okpuru aha Perfecto. Ọtụtụ n'ime egwú ndị a na-ahapụ site na ndekọ ụlọ ọrụ Paul Perfecto Records. Na mbụ, Pọl na-egwuri egwu na obere klọb ma n'oge na-adịghị anya, ama ama aha ọma DJ. Na 1994 kere Pọl setịpụrụ a abụọ-hour Mkpa Mix maka BBC Radio 1. A maara nke a dị ka Goa Mix na ugbu a bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na BBC Radio 1.
Champ-de-Mars bụ ogige ọha na eze dị na Paris na 7. n'etiti Ụlọ Elu Eiffel dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ na Ụlọ Akwụkwọ Agha Ugwu na ndịda ọwụwa anyanwụ. Mpaghara ogige bụ 24,32 ha.
Nke a bụ ndepụta nke ụfọdụ R & B na Modern R & B music skupin.Rhythm na bluesR & B nka (40. Years 50. Years) Johnny AceLaVern BakerJesse BelvinBrook BentonTiny BradshawCharles BrownRoy BrownRuth BrownRay CharlesArthur CrudupCecil GantRosco GordonWynonie HarrisScreamin 'Jay HawkinsClarence "Frogman" HenryIvory Joe HunterEtta JamesLittle RichardFats DominoLoyd Pricer & B, Doo Wop (50. afọ) The PenguinsThe CadillacsThe Five SatinsThe CloversThe HarptonesThe Five KeysThe CrestsFrankie Lymon & The TeenagersThe DellsR & B nka (60. afọ) James BrownWilson PickettJoe TexAretha FranklinSam CookeOtis ReddingThe Funk Brothers (Motown) Ray CharlesThe Bar-KaysThe SupremesBlue-eyed R & B nka (60. okpomọkụ ~) Righteous BrothersThe RascalsThe AnimalsSteve WinwoodSpencer Davis GroupVan MorrisonThemHall & OatesGrass RootsHamilton, Joe Frank & ReynolsFrankie MillerTina MarrieAlison MoyetJoss ewerekwa nkume & B nka (70. afọ), James Brown (ifịk si 50. afọ) Wilson PickettJoe TexR axis RoyceThe TrammpsStevie eche (ifịk si 60. afọ), The Ọnwụnwa (ifịk si 60. afọ) Anọ TopsChaka KhanSpinnersKool Jackson & The GangFunkadelicStylisticsThe 5Brothers JohnsonR & B / post-disko nka (80. afọ) Michael pointer JacksonThe SistersShalamarSkyyDeniece WilliamsRay Parker, Jr.Fat Larry si BandEvelyn "Champagne" KingThe ManhattansD. TrainPrinceThe WhispersTina Turner (ifịk si 60. Years) LakesideThe SOS BandSoučasné R & BR & B nka - mbido (80. Years) Janet JacksonJermaine JacksonKeith SweatFreddy JacksonWhitney HoustonSurfaceMtumeLoose EndsLuther VandrossGeorge ClintonSoul II SoulBobby BrownNew Jack SwingToday (R & B) GuyWreckx-N-EffectKeith SweatBasic BlackJeff ReddBobby BrownJohnny KempMichael JacksonSWVBig pAPA Moe CaneKool DeeJohnny GillBell Biv DeVoeR & B nka (90. ~ afọ) AaliyahAkonAlicia KeysAnastaciaAshantiAriana GrandeBeyoncéBlack eyed peas
Ememe Southside bụ ememme egwú nke na-eme kwa afọ na Southern Germany na nso Tuttlingen. E nwere ụzọ ọzọ ma bụrụ isi na ụda nkume na ya, akụkụ dị ukwuu nke usoro ihe omume ahụ bụ nke ndị ụlọ. Nbudata ndụ nke ihe nkiri ọ bụla na-elekọta ọwa egwu VIVA, MTV Germany. A na-akpọ ememme obodo obodo ya Oké Ifufe, nke a na-akpọ n'otu oge na Northern Germany kemgbe 1973. Ihe omume a yiri nke Southside na afọ ndị a, naanị oge ngosi.
Music NZ (RMNZ), nke e dere ede, bụ ndị na-ebipụta Ụlọ Ọrụ Na-edekọ Ihe na New Zealand (RIANZ), bụ òtù na-ahụ maka mgbasa ozi na-abụghị ndị ọrụ na-akpọ ndị na-egwu egwu na ndị na-ekesa na New Zealand. Ndị òtù nwere ike ịnweta ya maka ndị niile na-egwu egwú na-arụ ọrụ na mba a.
Justin Randall Timberlake (* 31. 1981 January Memphis, Tennessee, USA) bụ American na-agụ egwú na omee, itoolu na-oge Grammy Award-emeri na anọ na-oge Emmy Award emeri Awards.Do n'etiti ege ntị ọkọdọ ma ama dị ka onye so na nwa na-enweghị mmachi 'N mmekọrịta. 2002 weputara ọba egwu egwu ya nke a na-akpọ Justification, nke rere ihe karịrị nde 7 n'ụwa nile. Timberlakovo abụọ album FutureSex / LoveSounds e wepụtara na September 2006 na atọ songs si osisi na-họọrọ mbụ German Hot 100. Ọ na-esokwa ụlọ ọrụ ndekọ aha ya, Tenman Records, na William Rast.
Aha a na-akpọ aha bụ Ememme Italian Songs (Festival della canzone italiana). A na-eme ya kwa afọ kemgbe 1951 nọ n'obodo spa nke Sanremo, Liguria. N'afọ ndị mbụ enwere mgbasa ozi ebe 1955 nọ na telivishọn. Ememe ahụ bụ ihe mkpali maka asọmpi Eurovision.
Unbroken bụ nke atọ studio album nke onye America na-agụ egwú na songwriter Demi Lovato. 20 tọhapụrụ album ahụ. September 2011 site Hollywood Records. Demi ejiriwo ndi di iche iche di iche iche na ndi dere dika Toby Gad, Rock Mafia, Timbaland, Dreamlab, na ndi ozo. Ihe egwu nke album a bu ihe di egwu nke nsogbu onye nkasi obi bu nke weputara na njedebe nke 2010 mgbe e zigara ya ka o gwusi. Ọ bịara mgbe esemokwu na onye ịgba egwú na njem na Jonas Brothers mgbe Demi bịakwutere ya. A na-enwe egwu egwu na egwu ndị egwú na-agụ egwú dị egwu dị ka Rihanna na Nelly Furtado.
December bụ 336. ụbọchị n'afọ na Gregorian kalenda (337. na a itu ukwu afọ). Site na njedebe nke afọ na-anọgide 29 dní.UdálostiČesko1805 - Napoleonic Wars: French agha edu Emperor Napoleon nnọọ meriri ndị Russo-Austrian agha na Agha nke Slavkova.1848 - Olomouc abdicated Austrian Emperor Ferdinand I. The ọhụrụ eze ghọrọ iri na asatọ mgbe Ferdinand nwa nwanne Franz Joseph I. onye ahụ na-achị na iri isii na asatọ.
Plagiarism bụ nkà ma ọ bụ na nkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ na onye ọzọ ahụ n'ezie na-ede akwụkwọ ụgha hà ya. Ọrụ dị otú ahụ a na-akpọ plagiace ma ọ bụ plagiarism ma ọ bụ plagiátorství.Definice Czech Copyright Act - n'adịghị ihe atụ na German - echiche nke plagiarism adịghị na adịghị kọwaa mba ọkọlọtọ ISO 5127-2003 na-akọwa ya dị ka "na-egosi ọgụgụ isi ọrụ nke ọzọ na-ede akwụkwọ, biiri ma ọ bụ ṅomie n'ozuzu ma ọ bụ otu akụkụ, dị ka nke gị ". Nchedo emetụta nkà na nkà mmụta sayensị na ọrụ, "nke bụ a pụrụ iche n'ihi nke kere ihe" ma ọ bụrụ na ọ na-n'ụzọ ụfọdụ anya na-ekwu okwu, ma na-a translation program, nchekwa data, na na. The Copyright Act na-ekwu n'ụzọ na n'okpuru iwu nchedo - ma si otú dịghị plagiace - bụghị a "akpan akpan isiokwu nke na-arụ ọrụ na ya, kwa ụbọchị akụkọ ma ọ bụ ndị ọzọ na-egosi na ya, ihe echiche, usoro, ụkpụrụ, usoro, chọpụtara, na nkà mmụta sayensị ozizi na yiri usoro, nchịkọta akụkọ, na ihe ndị dị ka onwe ya. "